Muuse Biixi ayaa qasriga Madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday Shiinaha… – Hagaag.com
Muuse Biixi ayaa qasriga Madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday Shiinaha…
Posted on 7 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Maamulka Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabiley wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayay Wakiilka China u qaabilsan iskaashiga Africa “China-Africa Cooperation” (FOCAC), Ambassador Zhou Yuxiao oo safar seddax maalmood qaatay ku yimid Jamhuuriyadda Somaliland.
Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga warbixin guud ka siiyey horumarka ka hana-qaaday Somaliland ee ay iska kaashadeen shacbigeeda iyo dowladdu.
Waxaanu madaxweynuhu xubnaha wafdiga u sheegay in dalkani tusaale u yahay Geeska Afrika, marka loo eego horumarka dhinaca dimuquraadiyada ee uu ku tallaabsaday sagaal iyo labaatankii sanno ee u danbeeyey isbedelada dhinacyada badan leh ee ka hirgalay, haday tahay dhinaca doorashooyinka, hanaanka axsaabta xisbiyada qaranka iyo nidaamka qori-isu dhiibka ah ee hoggaanka dalka.
Dhinaca weftiguna waxa ay madaxweynaha kala hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee dhinacyada ganacsiga, iyo iskaashiga bulshada ee ay labada dal lahaayeen mudada dheer.
Ugu dambayntiina waxa la isku af-gartay in labada dal yeeshaan xiriir wanaagsan oo ku dhisan ixtiraam iyo in la iska kaashado dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka.
kulankan ayaa ku soo beegmaya xili dhowaan dowlada shiinaha ay ka carootay xiriir diblomaasi oo Somaliland la yeelatay dowlada Taiwan oo Shiinuhu aaminsan yahay iney ka tirsan tahay dalkeeda taasoo iyana ah dowlad gooni u goosad ah oo aan aqoonsi ka helin caalamka.
Madaxweyne Biixi ayaa maalmihii la soo dhaafay diidanaa inuu qaabilo danjiraha Shiinaha u fadhiya Somalia oo booqasho ku jooga Hargeysa, lamana oga in wafdigan Shiineska ah ay arrinta Taiwan kala hadleen Madaxweyne Biixi.